Nagu saabsan | Piedra (Xiamen) Sawirka Sawirka Co., Ltd.
PIEDRA (XIAMEN) SCULPTURE CO., LTD ku takhasusay sameynta farshaxannada iyo taalada, sida farshaxan bir ah, taalada naxaas ah, sawir gacmeedka, farshaxanka fiberglass, iwm. Kuwaas farshaxanada naxaasta ah iyo farshaxanka birta ah waxaa loo isticmaali karaa farshaxanno jardiino, taallo waaweyn oo bannaanka ah, qurxinta gidaarka birta, qurxinta daaradda, iwm.
In ka badan 15 sano oo waayo-aragnimo ah oo ku saabsan soo saarista iyo dhoofinta farshaxannada biraha iyo farshaxanada naxaasta ah, waxaan ku siin karnaa tayo aad u heer sareysa, saameyn weyn oo muraayad sare leh oo ku saabsan farshaxannada birta ah, shaqo farshaxan aad u fiican. Farshaxannadayada inta badan waxaa loogu talagalay farshaxan-yaqaannada, naqshadeeyayaasha, masraxa farshaxanka, jumlaleyda, mashaariicda dhismaha ......
Maaddaama oo ay ugu wacan tahay maamul tayo leh oo adag iyo sumcad wanaagsan oo dibedda iyo ta gudaha ah, farshaxannadayada waxaa laga iibiyay dalal badan, USA, Yurub, Imaaraadka Carabta, Sacuudiga, Israel, Indonesia, iwm, oo hadda waxaan wakiil ku leenahay dalka Malaysiya, Singapore iyo Philippine, waxaan rajeyneynaa shirkado iyo dad aad u tiro badan ama dad inay nagu soo biiraan si loo abuuro mustaqbal wanaagsan.
Fikradda “Tayada ugu sareysa, amaahda ugu fiican iyo qanacsanaanta macaamiisha” waa naftayada kooxdeena. Wish waxay fursad u leedahay inay ku adeegto !!
Nooca Ganacsiga: Soo-saare
Ganacsade / Ganacsade
Suuqa weyn: Waqooyiga Ameerika
Tirada Shaqaalaha: 100 ~ 150
Sanadkii la aas aasay: 2006
Dhoofinta pc: 80% - 90%
Waxaan la kulannay macaamiil fara badan oo isku hal ah iyo rugta farshaxanka. Waxaan nahay shuraako ku ah macaamiisheenna xiriirkii ugu horreeyay illaa adeegga iibka ka dib. Annaga oo ah soo-saare xirfad farshaxan leh, ayaan macaamiishayada ugala hadalnaa shuruudaha oo aannu u siinnaa farshaxanno bir ah oo weyn. Xiriirada sanadba sanadka ka dambeeya, waxaan dhidibnay xiriir waqti dheer ah waxaana ka helnay sumcad wanaagsan.
PIEDRA (XIAMEN) SCULPTURE CO., LTD in ka badan 10 sano oo khadka ganacsiga ganacsiga ah, waxay leeyihiin khibrado hodan ah xagga naqshadeynta waxayna sameystaan ​​farshaxanno loo diyaariyey iyo taalada. Alaabooyinkeenna ayaa isugu jira birta, bir, naxaas ah iyo sawir-gacmeedka fiberka. Dhamaan farshaxanada looma saarin qurxin bannaanka, sida meelaha fasaxa, qurxinta jardiinooyinka, qurxinta badaha, tuulooyinka, qurxinta magaalada; laakiin sidoo kale qurxinta gudaha, sida qurxinta hudheelka, qurxinta naadiga, qurxinta suuqyada, qurxinta xafiisyada, qurxinta guriga, soo bandhigista maktabadda iyo wixii la mid ah. Ha aaminsanahay farshaxanno farshaxan oo casri ah oo cusub, inay ku raaxeyn doonaan indhahaaga isla markaana ay sii deyn doonaan niyaddaada.
Hadal ahaan, waxaan haysannaa koox xirfad iyo iskaashato ah oo ka soo baxda shuruudahaaga. Kooxdayada waxaa ka mid ah hogaan farshaxan leh, iibiyayaal karti leh, naqshadeeyayaal farshaxan aad u wanaagsan, shaqaale khibrad badan leh, qof xakamayn tayo leh. Waxaan leenahay waayo-aragnimo aad u hodan ah oo ku saabsan sameynta farshaxanno iyo farsamooyin farshaxan lagu rakibay. PIEDRA (XIAMEN) SCULPTURE CO., LTD Hubaashu waxay bixin karaan adeegyo farabadan sida codsiyada macmiil kasta.
01. Soo bandhig sawirro qaraabo ah oo sawirro ah marka hore macmiilka.
02. Bixi naqshadeynta sawirada haddii macmiilku u baahan yahay.
03. Una farsameeyo farshaxanno tayo sare leh macmiilka.
04. Naqshadeynta macaamiisha ayaa si diiran loogu soo dhaweynayaa.
05. U diyaarso rarka macaamiisha.
06. U fidiya macmiilka tilmaam ku saabsan sida loo rakibo goobta, lana siiyo shaqaale ay ku rakibaan goobta mashruuc weyn.
07. Bixi adeegyo iib iyo iib hore.
08. U siiya macmiilka habab xoogaa la ilaaliyay.
09. Wuu la tartami karaa mashaariicda adag qaarkood.
Had iyo jeer halkaan u joog inaad si fiican u bixiso kahor adeegga iyo adeegga iibka kadib adiga.
PIEDRA (XIAMEN) SCULPTURE CO., LTD Waxay waqti dheer ku qaadatay samaynta iyo iibinta farshaxanka.Ourkeenu wuxuu leeyahay hoggaamiyeyaal horay u fikiray, naqshadeeyayaal hibo leh, iibiyayaal karti leh, shaqaale xirfad leh, qof xakameeya QC, iyo shaqaale khibrad leh. Waa lagu nasiin karaa inaad la shaqeyn karto annaga. Si diirran ayaan kuugu soo dhoweynayaa inaad na weydiiso waqti kasta, oo mar walbana halkaan ayaan u joognaa jawaabta.
Qolka 1407, CHANGAN BLDG, NO.75-77 LVLING ROAD, HULI DISTRICT, XIAMEN, 361009, FUJIAN, CHINA
Telefoon: 0086-13950080662, 0086-592-8264336
Fakis: 0086 592 5532472